တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် စမက်စွန်ဓရာဝစ် ၏အိမ်သာအဝင်အထွက်ကို သတင်းထောက်တွေနောက်လိုက်ပြီး ကင်မရာလိုက်ရိုက်နေတာကို အသံမပြတ်ပဋ္ဌာန်ရွက်ပွဲသကဲ့သို. အသံမပြတ်ပဲဆဲဆို	September 1, 2008
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် စမက်စွန်ဓရာဝစ် ၏အိမ်သာအဝင်အထွက်ကို သတင်းထောက်တွေနောက်လိုက်ပြီး ကင်မရာလိုက်ရိုက်နေတာကို အသံမပြတ်ပဋ္ဌာန်ရွက်ပွဲသကဲ့သို. အသံမပြတ်ပဲဆဲဆိုနေပုံ နှင့် သူ.အပေါ်ထိုင်းပြည်သူတွေ အရိုအသေမရှိ၊ရီးစရာလုပ်နေပုံ၊ ပြီတော့ သူ ကပုံမှန်အတိုင်း ဝက်နဲ့ပုံတူတဲ့လူဖြစ်တဲ့အားလျောက်ဝက်သားအရောင်ဆိုင်ဈေးသည်နဲ. စကားပြောပြီး သူမကျေနပ်ချက်တွေကိုတိုင်ပြော၊ တော်တော်ရီးရတယ်ဗျို.၊ကြည့်ကြပါ၊http://www.youtube.com/v/mtpiOvGZMyE&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&fs=1
သူဆဲဆိုသွားတာက သူများအိမ်သာတက်တာကိုသွားစောင့်နေတာ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ? ဘယ်သူသင်ပေးသလဲ?ဝန်ကြီးချုပ်အိမ်သာတက်တာကိုသွားစောင့်နေတာမထွက်လာဘူး၊ရူးနေလို.လား?ကျနော်မွေလာကတည်က တစ်ခါမှမတွေ.ဖူးဘူး၊တွေ.ဖူးလို.လား? နာမည်ကျော်တဲ့လူဖြစ်လို.ကျနော်တို.လာရိုက်တာ(လို.သတင်းထောက်တစ်ယောက်ကပြောပြ)၊နာမည်မကျော်ဘူး၊လူတွေကရူးနေလို.၊ ညစ်ပတ်လိုက်တာ၊ဘယ်လိုလဲ ခင်ဗျာတို. ဘာပြဿနာရှိလဲ?ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့သူက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စလုပ်လို.မရတော့ဘူးလား? အိမ်သာတံခါဖွင့်ပြီးရိုက်ကြမှာလား?ထိုင်းနိုင်ငံရုပ်သံသတင်းထောက်တွေဟာ ဒီလိုဖြစ်နေပြီ၊ပြည်သူအပေါင်းတို. ဒါကိုကြည့်ကြပါအုံး၊သူ တို.က ဒီလောက်ဘဲ ပညာရှိတာလား? ကျုပ်ကို လာရိုက်နေတာမရှက်ဘူးလား? ကျုပ်နှစ်နာရီလောက်မိန်.ခွန်းပြောတာကို ခင်ဗျားတို. ရုပ်သံမလွှတ်ဘူး၊ခင်ဗျာတို.ညစ်ပတ်လိုက်တာ၊ ဒါက လူ.အခွင့်အရေးနှင့်မညီညွတ်ဘူး၊ကမ္ဘာမှာ ရုပ်သံသတင်းဌာနတွေ ဒီလိုလုပ်တာ လား? ကျနော် နှစ်နာရီလောက် မိန်.ခွန်.ပြောတာကိုရုပ်သံသတင်းဌာနတွေက အသံ မလွှတ်ဘဲ အခုဝန်ကြီးချုပ်တစ်ယောက်အိမ်သာတက်တာကို ရုပ်သံတွေလိုက်ရိုက်နေတာ၊ မညစ်ပတ်ဘူးလား? မရှက်ကြဘူးလား?ကြည့်ကြပါအုံး၊ ကျနော်အခန်းအထိလာရိုက်ကြမှာလား? မရှက်တတ်တဲ့ကောင်း၊လိုက်ရိုက်နေတုန်ဘဲလား?ဝန်ကြီးချုပ်အိမ်သာအဝင်ကိုလိုက်နေတာ၊ထိုင်းရုပ်သံသတင်းဌာနတွေဒီလိုဘဲလား?သတင်းထောက်တွေလိုက်ရတဲ့အကြောင်း